Deg Deg::Madaxweyne Farmaajo Oo Dil Ka Badbaaday – KHAATUMO NEWS
Deg Deg::Madaxweyne Farmaajo Oo Dil Ka Badbaaday
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in laba haween ah ay ku lug lahaayeen qaraxii 24-kii July ka dhacay guriga dawladda Hoose ee Muqdishu oo lagu dilay Duqii Muqdisho iyo siddeed qof oo kale.
Galka Baarista waxa kaloo ogaaday In markii ay fasaxa qaateen ay ku horraysay Hodan, kadibna Maryan, ayna soo laabatay maalmo ka hor dabbaaldegyadii xorriyadda. Maryan ayaa ku dadaashay inay ka qaybgasho munaasabadaha 26-ka Juun iyo 1-da Luulyo oo labadaba Madaxweynuhu ka qaybgalay, hase yeeshee waxaa baaritaan ku jira inay doonaysay in madaxweynaha ay bartilmaameedsato.
Saraakiisha amnigu waxay aaminsan yihiin in qaraxu ku xirnaa Maryan.
Labada gabdhood ayaa soo galay dhismaha Ilaa saddex saac ka hor xilliga qaraxu dhacay.
Previous Post: Daawo:Nimco Dareen Oo Soo Qaaday Hees Farmaajo iyo Khayre Ku Abuurtay Cadho.
Next Post: Digniin Machadka Al-Furqaan Laascaanood iyo Jaamacdda Nugaal.